Gabar lugo dahab ah leh (ILAAH Abuurtiis weynaa) DAAWO VIDE0 – SBC
Gabar lugo dahab ah leh (ILAAH Abuurtiis weynaa) DAAWO VIDE0
Posted by admin on January 29, 2013 Comments
­Maraam Muhidat waa gabar lixaadkeedu dhameyn waxay ku dhalatey gacmo la’aan, waana ILAAH abuurtiis oo la yaab iyo qosol midna ma leh, laakiin hadana ILAAH uma waayin tab iyo xeelad ay nolasheeda ku dabarto oo ay ku noqoto qof isku filan oo nolasheeda aan ka quusan.
Maraam waxaa ILAAH u fudadeeyey inay adeegsato labadeeda lugood, iyadoo wax karsata, wax ku cunta, kuwa adeegadata, ku xirata dharkeeda, waxkuwabarata, ku isticmaasha Computer-da iyo wax kasta oo ay nolasheeda ugu baahan tahay in ay gacmo lahaan laheyd.
Maraam kaliya kuma koobnaa inay lugaheeda iyadu adeegsato ee waxay kaloo ugu adeegtaa qoyskeeda, waxaana warbixin video ah laga baahiyey Telefishinada wadanka Jordan laga daawaday iyadoo afka ku sida Saysar ama saxan ay ku wado sadex koob oo shaah ah, waxaa kaloo muuqaalkaasi laga arkey iyadoo ilkaha u adeegsanaya inay boorsadeeda Iskoolka garabka ku surato iyo waliba iyadoo lugaheeda cunto ku cunaysa kuna karsanaysa.
Maraam oo ka haldey dareenkeeda ku aadan lixaad la’aadka ILAAH u keenay waxay sheegtey in inkastoo aanay gacmo laheyn, hadana ay dareemayso inay leedahay dareen ku aadan in ay tahay ruux bini’aadam ah oo dhameystiran, maadama ILAAH siiyey lugo dahab ah oo ay ku qabsato wax kasta oo ay doonayso.
Link-ga Video-ga hoose ka daawo la yaabka gabadhan oo wax kasta ku qabsanaysa lugaheeda dahabka ah ee ILAAH ugu deeqay.